स्ल्यापड्रैगन7को साथ ग्यालक्सी S820? | Androidsis
स्ल्यापड्रैगन7को साथ ग्यालक्सी S820? यो एक बेंचमार्क द्वारा देखाईएको छ
टेक्नोलोजीको उन्नति लीप र सीमाहरू द्वारा, त्यहाँ कुनै शंका छैन। त्यसकारण, यो सामान्य हो कि हामीले उपकरणहरू बारे पहिलो अफवाहहरू सुन्न थाल्छ जुन अर्को वर्षको पहिलो त्रैमासिकको बीचमा आउनेछ।
यी उपकरणहरू मध्ये एक जुन अर्को सालको प्रकाश देख्नेछ सैमसंग ग्यालेक्सी S7। आजसम्म हामीले देख्यौं कि कोरियाली कम्पनीले भर्खरै सबैभन्दा ठूलो मोबाइल फोन मेला, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेसको उत्सवको बेला नयाँ ग्यालक्सीलाई कसरी प्रस्तुत गर्‍यो।
हामीलाई थाहा छैन कि यस पटक सामसुले काउन्टी क्यापिटल छनौट गर्नेछ र आम जनतालाई प्रस्तुत गर्नको लागि यसको अर्को फ्ल्यागशिप के हुनेछ। यसको लागि हामीले अझै अर्को बर्षको सुरू सम्म कुर्नुपर्नेछ, तर यसको बाबजुद भविष्यको सामसु S एस about को बारेमा पहिलो अफवाहहरू बाहिर आइसकेका छन।
ग्यालक्सी S7, पहिलो अफवाहहरू
ग्यालक्सी एस,, हामी मान गर्छौं कि यो भनिन्छ, प्रोजेक्ट लकी को कडनेम हो। भविष्य टर्मिनल एक मोबाइल उपकरणमा आज सम्म कहिल्यै देखिएको क्रान्ति हुन सक्छ। यदि हालको सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस Samsung सामसु range नै एक्सेनोस76२० द्वारा निर्मित प्रोसेसरबाट सुसज्जित छ भने यस दायराको सातौं संस्करणमा यसले स्नैपड्रैगन 7420२० लाई समाहित गर्न सक्दछ।
यो डाटा कोरियाली निर्माता को भविष्य टर्मिनल को एक प्रोटोटाइप के हुन सक्छ को एक बेंचमार्क चुहाएको धन्यवाद आउँछ। छविमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, उपकरणको नाम ग्यालक्सी एस of को कोडनामसँग मिल्छ, जसमा केहि धेरै चाखलाग्दो विशेषताहरू छन् जुन हामी तल हेर्नेछौं।
AnTuTu हामीलाई टर्मिनलको बारेमा पहिलो अफवाहको साथसाथै स्यामसंग उपकरणले समावेश गर्ने पहिलो अनुमान गरिएको विनिर्देशहरू प्रदान गर्न फर्काउँछ। यद्यपि यो अझै छिटो छ र सबै परिवर्तन गर्न सक्दछ, कोरियाली टर्मिनल को अनुमानित विशेषताहरु निम्न छन्। भित्र, हामी एक प्रोसेसर भेट्टाउनेछौं Snapdragon 820 क्वालकॉम द्वारा निर्मित, यो उपकरण चिपमेकरको उच्च-अन्त SoC हुनेछ। यस SoC सँगसँगै, S7 समावेश गर्दछ GB जीबी र्याम मेमोरी.
तपाइँको स्क्रिन सम्म बढाईनेछ 5,7 इन्च। यस स्क्रिनमा QHD रिजोलुसन हुन्छ जुन २2560० x १144o पिक्सेलको बराबर हुन्छ। यदि हामीले सोचेको सैमसंग प्रोटोटाइपको अधिक विशिष्टता देख्यौं भने हामी यो कसरी एन्ड्रोइड .5.1.1.१.१ लोलीपपमा चल्दछौं हेर्छौं, यसमा GB 64 जीबीको र्याम मेमोरी छ र क्यामेराको Me मेगापिक्सल उपकरणको पछाडि अवस्थित मुख्य क्यामेराको लागि र फ्रन्ट क्यामेराको लागि MP MP।
अझै धेरै बाँकी छ, त्यसैले चिम्टाको साथ यी अफवाहिक विशेष विवरणहरू लिनु राम्रो हुन्छ, सायद, सबै चीज अहिले र यसको आधिकारिक रिलीजको बीचमा परिवर्तन हुनेछ। हुन सक्छ यो गर्नुहोस्, यहाँ ग्यालक्सी S7 को पहिलो अफवाहहरु छन्। र तपाइँलाई, भविष्यको सामसु। टर्मिनलको यो पहिलो अफवाहहरूको बारेमा तपाईं के सोच्नुहुन्छ? ?
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » स्ल्यापड्रैगन7को साथ ग्यालक्सी S820? यो एक बेंचमार्क द्वारा देखाईएको छ
कम्तिमा months महिना जब सम्म तिनीहरूले प्रस्तुत गर्दैनन् र तपाईं पहिल्यै अफवाहहरूको साथ शुरू गर्नुभयो। के निश्चित छ यो आउँछ कि छ
जुआन इक्विक भन्यो
मैले स्यामसंगको अधिकतम भनेको सुनेको छु जस्तो लाग्छ कि यसले मात्र परीक्षण गरिरहेको थियो किनकि यसले प्रदर्शन हेर्न चाहन्छ
Juan iquique लाई जवाफ दिनुहोस्
haha 64 gb ram, कि एक पागल हो, राम्रोसँग छानबिन गर्न, वास्तविक अफवाहहरूले २० mpx क्यामेरा र kk स्क्रिन भन्छ
रुसियामा ip68 प्रमाणपत्र र g जी जडानको साथ
Brayancarpio लाई जवाफ दिनुहोस्
यो सोनी Xperia Z5 को स्थिर शट मोड कसरी कार्य गर्दछ
आइकनहरू मिलाउन पुनःआकार गर्न नोवा लन्चर अपडेटहरू